Njalo sokukhulelwa uhlukile. Kubangela nemizwelo eminingi ebuhlungu phakathi umama okhulelwe futhi umfutho ngokomzwelo bathandaze usuku abalulekile liyakhuphuka.
Zonke izinguquko bokuphila emzimbeni zimi ngazinye njengoba ukuma esiswini ngesikhathi sokukhulelwa. Ngezinye izikhathi owesifazane uyalibona izinguquko emzimbeni wakho ngemva kwezinyanga ezimbalwa, abanye ukuphatha ukufihla isikhundla ezithakazelisayo, ngisho izinyanga eziyisithupha. Futhi-ke, ngamunye ukunakekelwa kwabakhulelwe ngekusasa, siyoba yini sibalo sakhe.
Yini kuthinta ukuma esiswini?
Ngo senyanga yokuqala amasonto 12, ayenzi noma yiziphi izinguquko ezibukwayo. Ngalesi sikhathi, i-inqubo ebalulekile ukuthi iqanda eselivundisiwe inamathela odongeni lesizalo. Ngemva kwalokho kukhona ukukhula fetus nokuthuthukiswa nendawo yayo, ukwanda amniotic fluid, kodwa ongabalulekile lowo, ngoba kwesibeletho ikhula ngisho hhayi esifundeni pubic. Ngenxa yalokhu, abanye abesifazane ngokwabo abawazi lokho okuseza.
Kodwa kusukela yesibili senyanga kwesibeletho kancane kancane antante inkaba, esiswini luyanda, kanye ezungezile isaziso izinguquko. esiswini ukuma ngesikhathi ukhulelwe zingase zihluke, odokotela ukuzisebenzisa ukuze kutholakale kulokho isikhundla isithelo. Labo abakholelwa imithi yendabuko phikisana ukuthi kuyasiza nokuba ukunquma ocansini ingane.
Ubukhulu esiswini ngabanye futhi kuncike ezintweni eziningana:
kwesisindo umama okhulelwe;
ivolumu ye-amniotic fluid,
isikhundla kanye nosayizi izithelo.
Kunoma ikuphi, abesifazane abakhulelwe kufanele kubonakale nguchwepheshe, onqumayo ukuthi konke kuhamba kahle inqubo kanye ngabe kukhona thuthuva sina ekuthuthukisweni.
Kanjani ukwanda esiswini
Lapho ngomzuzu wokukhulelwa, ukuwazi, ngakho kwezokwelapha ukhombise usuku ekuqaleni sokukhulelwa njengoba ngosuku lokuqala lokugcina esikhathini. Kepha kusukela kulolu suku iqala Countdown ukuba okwamanje lapho kuzalwa umntwana intando. Kuzothatha isikhathi eside ukuba ufunde ubulili umntwana, ngoba ultrasound kwenziwa kuphela ngenyanga yesihlanu. Kusukela ezikhathini zasendulo, kwakunenkolelo yokuthi ukuma esiswini ngesikhathi sokukhulelwa amantombazane nabafana kuhluke bodwa, futhi ngosizo lwabo umbelethisi wazama ukwenza izibikezelo mayelana ingane esizayo.
Ultrasound isetshenziswa ukuhlola umbungu kakade at amasonto 2-3, usayizi sac sokukhulelwa kuyinto 22 mm. Ngalesi sikhathi, namanje akakwazi ngokuthi indoda. Kodwa ngemva 2 amaviki sizokwazi ukukhuluma ngobukhulu ingane, bayoba uhla 6-7 cm nesisindo labantu abangu-25, ngesikhathi ngesonto wesithupha ukukhula kuyoba izikhathi ezingaphezu kuka-2 ngaphezulu, futhi isisindo kuzokwanda izikhathi 4.
Kuphela yesibili senyanga, Lizokwakhiwa unina esizayo uyibona nokuzwakala izinguquko emzimbeni. Ngalesi sikhathi, njengoba ukuphakama wengane nesisindo ukungezwa amniotic fluid, ngakho-ke kwaba ukhululekile ukuba esibelethweni.
ukuqhubeka cishe kakhulu. Kungaba ziyahlukahluka, kodwa kuncike imikhawulo ezifana:
amasonto 20: ukuphakama - 26 cm; isisindo - 300 g;
Kumaviki awu 24: ukuphakama - 30 cm, isisindo - 680 g;
amasonto 28: ukuphakama - 35 cm, isisindo - 1200 g;
amasonto 32: ukuphakama - 42 cm, isisindo - 1700 g;
amasonto 36: ukuphakama - 48 cm, isisindo - 2500
Ngaphambi ekuqaleni sokukhulelwa kwesibeletho kuyinto ipheya emise ukala kusuka 50 kuya 100 g, ezinyangeni zokuqala zalesi ukubaluleka asishintshi, kodwa ngokuhamba kwesikhathi kube kwandisa kakhulu. Ukuthi lolusuku ezakheke, indawo, futhi kwanda ngoba kunqunywa ultrasound ngesikhathi lapho osayizi idlule ububanzi nethambo lenqulu. Phakathi nenkathi yokukhulelwa kwesibeletho sisonke kukhuphuke ngo izikhathi 500, isisindo sawo sifinyelela engafinyelela kwengu-1 kilogram.
Ingabe Umumo besisu kunqunywa ngesikhathi sokukhulelwa ubulili womntwana?
Isihloko mpikiswano okuphakade - iyona ubulili wengane futhi yini akha it ihambelana esiswini. Zonke lezi zimpikiswano ezazikhuluma, lapho kwakungekho ultrasound, futhi ngisho namanje, ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa intuthuko kwezokwelapha kanye nogogo nomkhulu e Ummemezeli zabo, ozozalwa - ungumfana noma intombazane.
Iqiniso lokuthi izinguquko zenzeka ngesikhathi sokukhulelwa esiswini ukuma izinyanga. Photo iqoqo abesifazane abaye badlula le nqubo, futhi ufakazela ukuthi ngezinye izikhathi ngenyanga yesine sesisu oyindilinga xaxa, futhi lesishiyagalolunye kuba side. Lokho, ezinkathini ezihlukahlukene, ungacabanga ngendawo ezehlukene ingane. Ngesikhathi esifanayo omama abakhulelwe ukuza nomkhulu wakhe nalabo wabikezela: ". Isisu ikhukhamba - umfana kuyoba" Kwenye indawo, omama ogogo bathi uma lolu hlobo esiswini nakanjani intombazane.
Ososayensi bakholelwa ukuthi leli uphethwe yini ethembekile, futhi uma bendabuko abazinikezele imithi endaweni ethile khona, Ikona nje ngengozi. Bakholelwa ukuthi ukuma esiswini ngesikhathi sokukhulelwa incike ukuma okungukuthi isithelo.
Kuleli zwe lanamuhla ubheka asebekhulile, esekelwe ubandlululo, kunendima ethile ekugcineni ezincane, abesifazane ngokuya ukholelwa US, lapho ufuna ukunquma ubulili esiqondile umntwana, nakuba kwezinye izimo umuthi olusemthethweni asikalungi. babekholelwa Ngaphambili ukuthi ukuma esiswini ngesikhathi sokukhulelwa kukhona intombazane oyindilinga xaxa, umfana watshela lwesisu enwetshiwe. Kodwa izibikezelo enjalo zigcwaliseka akuyona ngaso sonke isikhathi.
Kukhona iqembu kukhona nabesifazane ababemkhalela, bakholelwa ngokuqinile eqinisweni lokuthi izindlela ezihlukene zokubiza esiswini ngesikhathi sokukhulelwa amantombazane nabafana. Izithombe sibalo olushintsha nyangazonke, ibekwa Diaries siqu, namabhulogi, umbhali amawebhusayithi kanye ukuxhumana nomphakathi wonke ubani ematasa ku-intanethi. Abanye abantu bazi ukuthi kungcono kakhulu ukulinda ukuze ultrasound, kuyilapho abanye bakhetha ukusebenzisa izindlela ezindala bendabuko nokubhula.
Kuyaphawuleka ukuthi, nakuba ukuma Imizimba kuthinta omama esiswini zingahluka usanda kukhulelwa lokuqala nelesibili. Nokho kukhona abanye ukuhlobana nezakhi ezihlukene ngokomzimba kanye nosayizi esiswini:
Kahle kahle, omama esiswini ine ukuma ovoid futhi kancane tapered. Uma izinkalo sowesifazane, nokucija kuzobonakala ikakhulukazi ngesikhathi senyanga yesibili. Thina nokucija bazilungiselela omama nulliparous, kuzo zonke ezinye izimo - phansi.
Round noma ipheya esiswini kubonisa ukuthi umama okhulelwe akazibandakanyi ukushaja has ababuthakathaka imisipha besisu, kungaba futhi semali amniotic fluid noma ingane ezinkulu.
esiswini Little kusikisela ukuthi abesifazane oligohydramnios noma yena uphethe ingane enhle.
Ezinye ngeziphambeko kusukela kuyinsakavukela
Nakuba kunenkolelo yokuthi intombazane ithi esiyindilinga lwesisu, odokotela bathi kungaba ukuma ohluke ngokuphelele esiswini ngesikhathi sokukhulelwa intombazane. Izithombe ogogo esifanayo nomama, isizukulwane amadala akwa izibonelo nabajwayelene nabo abesifazane nesimo ziyisiboniso ephelele. Kuyefana nasendleleni abafana. Kufanele ukhathazeke uma kwesisu okungazelelwe iba azilingani futhi ikusasa unina entsha azizwa ukungakhululeki. Kulokhu kumele uthole usizo lodokotela nokuqhuba kokuxilongwa eyengeziwe noma ukwelashwa esibhedlela.
A kancane mayelana ultrasound
Thola amaziyo lokuqala ezibukwayo kanye nengane bangaba ngaphambi kokuzalwa kusiza ultrasound. Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile umama okhulelwe uzokwazi ukubona uhlaka ingane, lokhu kuhlolwa kuyadingeka ukuhlola okuthile:
ukuthi kukhona ethunjini, noma ukukhulelwa zamanga ;
ukwazi usuku ekuqaleni yokukhulelwa nokubeletha;
hlola isikhundla umbungu;
ukunquma ukuthi lokuchezuka;
kulungile uma ingane eba;
ukuthola ukuthi yini ingane ubulili.
Kukhona nezinye izindlela luhlolo, kodwa ukuthi ultrasound ayinangozi futhi ezivamile.
Ukukhulelwa - esijabulisayo empilweni yonke wesifazane, ngakho ungesabi noma ukugwema.